Isbadalada iyo isbadalka iyo ka bixitaanka barnaamijka moodada, Periscope | Androidsis
Manuel Ramirez | | Codsiyada Android, Streaming, Tababarada
Wixii aan beryahan ku naqaannay Periscope ayaa cirka isku shareeraysa dadka isticmaala iyo waxqabadka, oo aan dhahno waxay noqoneysaa arrin imika socota. Sida Twitter, Facebook ama Instagram ay waqtigaas ahaayeen. Mid kale oo ka mid ah adeegyadaas oo noo geynaya adduunka ku xiran iyada oo loo marayo shabakadaha bulshada, barnaamijyada iyo dhammaan noocyada aaladaha moobaylka. Ama mid ka mid ah maxay ciyaar toos ah ama sida ay noqon laheyd inaad ka qeybgasho xaflad dad aan la aqoon oo joojiyay inay qulqulaan dhacdooyinkooda ama qorrax dhaca mid ka mid ah xeebaha Ibiza ilaa dhawaaqa durbaannada, Periscope waa adeeg si toos ah loogu bilaabay xidigta.
Iyo sida aan rabno inaad u ogaatid mid kasta oo ka mid ah nookheeda iyo waxyaalihiisa, waxaan horkeena keenaynaa mid kasta oo ka mid ah faahfaahintiisa iyo nuxurka codsigan taas oo si fiican ugu xiran waxa uu Twitter yahay, sidaa darteed waxaa lagu helay tan isla shirkad. Marka bal aan u gudubno waxa uu Periscope noo hayo.
1 Laakiin waa maxay Periscope?
2 Aasaaska Periscope
3 Soo qulqulaya
4 Waxyaabaha horudhaca ah iyo wax ku oolka ah ee ina soo mara
Laakiin waa maxay Periscope?
Guud ahaan, Periscope wuxuu ku saabsan yahay barnaamij kaa caawinaya inaad ogaatid oo aad sahamiso adduunka adoo daawanaya oo soo dejinaya fiidiyaha waqtiga dhabta ah. Tani waa tayadeeda ugu weyn iyo dhidibka dhexe ee mid kasta oo ka mid ah curiyeyaasheeda waaweyn ay ku habboon yihiin oo dufan yihiin.
Markuu qof bilaabayo wabiyaha tooska ah waxay la wadaagaan fiidiyaha, codka iyo goobta ay joogaan taageerayaashooda ama kuwa raacsan. Goobtu waa shay la qaabeyn karo in la furo haddii la doonayo.
Kuwa ciyaaraya ama daawanaya toos u socodka waxay awoodi doonaan inay kula dhaqmaan waqtiga dhabta ah farriimaha iyo qalbiyadaKuwani waa nooca "waan ku jeclahay" ee Periscope. Sida Twitter-ka, waxaan raaci karnaa isticmaaleyaasha isla waqtigaas oo aan ku soo saari karno durdurrada xiriiriyeyaasha laga wadaago Twitter-ka laftiisa.
Waxaan ku galnaa bartayada Twitter-ka, ama xitaa lambarka taleefanka ee ku jira barnaamijka, ka dib markii la soo dejiyo. Marka tan la sameeyo, waxaan horeyba u sameynay talaabada ugu horeysa si aan ugu aadno shaashad aan ku raaci karno isticmaaleyaasha aan ku leenahay Twitter.
Waanuna u gudbi doonaa shaashadda weyn ee leh saameyn cad oo ku aaddan Qalabka Naqshadeynta oo leh saddexda astaamood ee ugu sarreeya xagga sare ee na geynaya saddexda qaybood ee muhiimka ah ee Periscope. Midka koowaad ee bidix waa helitaanka durdurrada tooska ah ee ka jira ama ka dhacay mid ka mid ah isticmaaleyaasha aad raacdo; midka dhexe, oo leh sawirka meeraha, wuxuu na hor dhigayaa noolaha ugu caansan ama durdurrada xilligan; iyo midigta midigta, taas oo loogu talinayo inay isticmaalaan. Markaad gasho tabkaan ugu dambeeya, waxaad ka aadi kartaa astaantaada astaanta midigta.
Qeybta hoose ee shaashadda waxaan haynaa badhanka sababaya FAB ee noo horseedaya inaan bilowno qulqulka dadweynaha ama kuwa gaarka loo leeyahay. Markii aan bilowno qulqulka gaarka ah kaliya kuwa adiga ku raaca ee kuu xilsaaray waad awoodi doontaa inaad aragto fiidiyaha. Waxaan siinaynaa qulqulka cinwaan oo aan u marnaa seddex ikhtiyaar: midka ugu horeeya ee wadaaga goobta, kan labaad oo tilmaamaya cidda sheekaysan karta, iyo midka saddexaad oo go'aan ka gaaraya haddii aan dooneyno qulqulkaan inuu tago Twitter.
Xilligan socodka wuxuu ku shaqeeyaa muuqaalka sawirka, markaa muuqaalku waa inuu sugaa cusbooneysiin cusub. Waxaad ikhtiyaar u leedahay inaad isticmaasho mid ka mid ah labada kamaradood ee aad ku haysato boosteejada, caqli ahaanna hore ayaa waxoogaa u xanuunsanaya tayada darteed, laakiin tani waxay kuxirantahay taleefanka aad haysato.
Mid ka mid ah xogta muhiimka ah ayaa ah intaad qulquleyso, kuwa fiidiyowga ciyaaraya waxay lahaan doonaan dib u dhac 1-2 ilbiriqsi ah. Daqiiqada aad rabto inaad kudhameyso qulqulka, adiga oo hoos u xoqaya ayaad soo gabagabeyneysaa.
Halkan hadda wuxuu galayaa mid ka mid ah wajiyada 'Periscope'. Daqiiqada aad dhammeyso socodka, waxaad si toos ah uga helaysaa tirakoobka. Heerka haynta, wadarta daawadayaasha, wadarta waqtiga daawashada mudduna isla markiiba way ka soo muuqan doontaa adiga.
Waa muhiim inaad taas ogaato Periscope wuxuu keydsadaa dhamaan durdurrada 24 saac, taas oo waqtigaas ay ku waayi doonaan. Aynu u maleyno inaan wajaheyno a nooca snapchat socodka tooska ah iyo tooska ah. Wax walwal ah oo horteenna ka dhacaya oo aan hadda ka dib innoo dhici doonin innaga horteen, markaa Periscope wuu korayaa wuuna korayaa isagoon istaagin
Waxyaabaha horudhaca ah iyo wax ku oolka ah ee ina soo mara
Tani waa falsafada 'Periscope', taas oo ah "Kuwa kale ha u arkaan adduunka sidaan u aragno". Tani waa ujeeddada iyo hal ku dhigga codsigan iyo daraasadda mas'uul ka ah horumarinteeda.
Waxaan wadaagnaa waaya-aragnimo, kuwaasina waxay dhaafi doonaan 24 saacadood si qof kasta oo na soo raaca uu u tarmi karo oo uu si dhow noogu barto ama waxa inagu xeeran. Iyadoo barnaamij si xarrago leh loo qaabeeyey, oo si fudud loo isticmaali karo oo noo diyaarinaya mid kale oo ka mid ah waaya-aragnimada oo ah adeeg ku xidhan adduunyada khadka tooska ah ee aynu ku safrayno.
Haddii aadan isku dayin oo aad rabto inaad ogaato mid ka mid isbeddellada xilligan, ha ka raagin inaad dhex marto indhaha Periscope. Aad loogu taliyay.
Periscope - fiidiyoow toos ah
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Codsiyada Android » Streaming » Ogaanshaha iyo adeegsiga Periscope, adeegga socodka waqtiga-dhabta ah